आज शहिद दिवस । बीर शहिदहरुप्रति सम्मान – HK Tube Nepal
वि.सं. १९९७ माघ १० गतेदेखि १५ गतेसम्म चार सहिदको प्राण हरण गरिएको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाइँदै आएको छ ।
HK Tube १६ माघ २०७७, शुक्रबार १३:४६
काठमाडौ / आज माघ १६ गते, शहिद दिवस । जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध बलिदानीपूर्ण संघर्षगाथा बोकेका शहिदहरुको सम्झना गरिने दिन हो । वि.सं. १९९७ माघ १० गतेदेखि १५ गतेसम्म चार सहिदको प्राण हरण गरिएको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाइँदै आएको छ ।
तर पछिल्ला दिन शहिदको नाममा विकृत्ति छाएकोछ । सडक दुुर्घटनामा मारिएकाहरुदेखि चोरडाँकामा सजाय भोगेकाहरुसमेत अहिले शहिदको सूचिमा परेका छन् । त्यो स्मरण गर्दा धर्मभक्त, दशरथ , गंगालाल र शुक्रराज शास्त्रीको आत्माले नेपालीलाई पक्कै सराप्ने छ ।
विगतमा यो दिवसको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक विदा दिने चलन थियो । तर गणतन्त्र स्थापनासँगै यो प्रचलन हटाइयो । तर नामकै लागि भएपनि आज सरकारले शहिदको सम्झनामा केही फुलको गुच्छा समर्पण गरेको छ । यसका लागि आज विहानै राजधानीमा प्रभातफेरीको आयोजना गरियो । काठमाडौं महानगरपालिकाको संयोजनमा उक्त प्रभातफेरीको आयोजना गरिएको हो ।
शहिदको स्मरणमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनालेसमेत मार्च पास गरेका छन् । लैनचौरस्थित शहिद उद्यानमा प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत सहभागी भएका छन् । ओलीका साथ उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापासमेत उपस्थित थिए ।